Mapisarema 136 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
136 Ongai Jehovha, nekuti akanaka;+Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.+ 2 Ongai Mwari wavanamwari,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 3 Ongai Ishe wemadzishe,Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 4 Iye ega ndiye anoita zvinhu zvikuru zvinoshamisa,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.+ 5 Akaita matenga neunyanzvi,*+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 6 Akatambanudza nyika pamusoro pemvura,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 7 Akaita zviedza zvikuru,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi, 8 Zuva, kuti ritonge masikati,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi, 9 Mwedzi nenyeredzi, kuti zvitonge pamwe chete usiku,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 10 Akauraya matangwe eIjipiti,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 11 Akabudisa vaIsraeri pakati pavo,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi, 12 Neruoko rune simba+ uye neruoko rwakatambanudzwa,Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 13 Akakamura Gungwa Dzvuku nepakati,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 14 Akaita kuti vaIsraeri vapfuure nepakati paro,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 15 Akazunzira Farao neuto rake rehondo muGungwa Dzvuku,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 16 Akatungamirira vanhu vake nemurenje,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 17 Akaparadza madzimambo makuru,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 18 Akauraya madzimambo ane simba,Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi, 19 Sihoni+ mambo wevaAmori,Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi, 20 NaOgi+ mambo weBhashani,Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 21 Akagova nyika yavo kuti ive nhaka,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi, 22 Nhaka kumushumiri wake Israeri,Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 23 Akatiyeuka patakanga takaderera,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.+ 24 Airamba achitinunura kumhandu dzedu,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 25 Anopa zvinhu zvese zvipenyu* zvekudya,+Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 26 Ongai Mwari wekumatenga,Nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.
^ Kana kuti “nekunzwisisa.”